नागरिक कोड: 'वकील को शक्ति र प्रतिनिधित्व'
कानूनी नीति गतिविधि को लागि आज को दिन विकसित छ एकदम कडा छ । किनभने व्यवस्था छ मुख्य नियामक सामाजिक सम्बन्ध छ । यो तथ्यलाई देखाउँछ एक उच्च स्तर मा प्रगति को समाज । यो विख्यात गर्नुपर्छ भनेर सही थियो छैन सधैं एक प्रमुख नियामक छ । आफ्नो थिए हिंसा र धर्म हो । तर समय सिद्ध छ शून्यता को यी विभाग को सन्दर्भ मा विनियमन मान्छेतल लाइन छ कि हिंसाको कार्यहरू मा मात्र कमजोर आत्मा, र धर्म कथित विशेष गरेर विश्वासीहरूलाई. यो कारक कारण को उद्भव पर्याप्त रोचक कानूनी संस्थाहरु छन् कि अझै पनि सञ्चालन मा छ । उदाहरणका लागि, धेरै अक्सर एक व्यक्ति, कारण आफ्नो जीवन वा कमी को एक वास्तविक मौका तपाईँले ठीक पूरा. त्यसैले, उहाँले प्रतिनिधिहरू केही आफ्नो कार्य र अवसर अर्को व्यक्ति को आधारमा एक निश्चित कानुनी संस्था हो, जो विस्तार वर्णन नागरिक कोड. वकील को शक्ति र प्रतिनिधित्व हो त्यसैले प्रमुख विभाग यस मामला मा. तिनीहरूले आफ्नै विशिष्ट कार्यान्वयन हुनेछ, जो अधिक विस्तार मा वर्णन पछि लेख मा. तपाईं पहिले सामना सुविधाहरू वकील को शक्ति र यसको प्रत्यक्ष भेटघाट, यो विश्लेषण गर्न आवश्यक छ सम्बन्ध, नै मा जो श्रेणी वास्तवमा अवस्थित छ । त्यसैले आज प्रतिनिधित्व । यसको संरचना र कार्य, यो कानूनी सम्बन्ध को यस प्रकारको छ, एकदम सरल छ । को प्रावधान अनुसार हालको कानून र केही सैद्धान्तिक न्यायलाई, प्रतिनिधित्व प्रक्रिया को कुनै पनि कार्यहरू द्वारा एक व्यक्ति को तर्फबाट अर्को छ जो प्रत्यायोजित आफ्नो क्षमताहरु छ । यो कानुनी संस्थान छ र छ विकास मा नागरिक व्यवस्था छ । यसको अस्तित्व शाखा को सिद्धान्त को समानता दल र मनोभाव छ । धेरै छन् वर्गीकरण माथि प्रस्तुत संस्थान. तर सबैभन्दा सही र सही छ, यो मा आधारित प्रावधान विधान कार्यहरू, विशेष मा, को नागरिक कोड को रूसी संघ. त्यसैले, यो सम्भव छुट्याउन गर्न दुई प्रमुख प्रकार को उल्लेख संस्था, अर्थात्: पहिलो प्रकारको अस्तित्व र सञ्चालन को संस्थान को उपस्थिति बिना कुनै पनि कानूनी तथ्य । उदाहरणका लागि, आमाबाबुले कानूनी प्रतिनिधिको लागि आफ्नो जवान छोराछोरी, अभिभाबकहरुको लागि अयोग्य मान्छे, आदि.
लागि रूपमा दोस्रो प्रकार को संस्था हो, यसको अस्तित्व छ कारण एक महत्त्वपूर्ण कानुनी वास्तवमा को निष्कर्ष को एक सन्धि छ । अन्य शब्दहरू मा, एक व्यक्ति प्रतिनिधिहरू आफ्नो अधिकार गर्न अर्को व्यक्ति । ठेके को यस प्रकारको भनिन्छ शक्तिहरु को वकील. आफ्नो कुञ्जी सूची र सुविधाहरू छन् तय गरेर नागरिक कोड यो वकील को शक्ति छ यस मामला मा संग एक ठूलो संख्या को विशेष क्षण भनेर छलफल गर्न आवश्यक छ । त्यसैले, हामी फेला कि बाहिर त्यहाँ प्रतिनिधित्व व्यवस्था अन्तर्गत र अनुबंध । यो वकील को शक्ति यो मामला मा दोस्रो प्रकार को भन्नुभयो संस्था हो । तर यो के हो श्रेणी छ । लेख अनुसार को नागरिक कोड को रूसी संघ, वकील को शक्ति छ.
एक प्राधिकरण को एक लिखित छ कि चरित्र जारी गरेर अर्को एक व्यक्ति छ । को आधार मा यो कागजात, को प्रतिनिधिमण्डल अधिकार र जिम्मेवारीहरू बाहिर छ । को मुख्य विशेषता वकील को शक्ति भन्ने तथ्यलाई छ, यो गर्न सकिन्छ जारी गर्न दुवै कानुनी संस्थाहरूको र व्यक्तिहरूलाई रूपमा, नागरिक कोड को रूसी संघ हामीलाई बताउँछ. यो वकील को शक्ति, त्यसैले, छ एक विशिष्ट एक-पक्षिय सम्बन्ध को कार्यान्वयन लागि, यो छ जो पर्याप्त उत्पादन गर्न हुनेछ केवल एक पार्टी । जस्तै थुप्रै कानूनी विभाग, वकील को एक शक्ति हुन सक्छ धेरै विभाजित सम्बन्धित संस्थाहरूको । वर्गीकरण बाहिर छ को आधार मा अक्षांश को सरुवा शक्तिहरु. सामान्य मा, यस्तो प्रजाति विभाजन मात्र छ र सबै भन्दा भरपर्दो अनुसार, यो निम्न प्रकार वकील को शक्ति भिन्न छन्, अर्थात्: यो टिप्पण लायक छ कि अवधारणाहरु यी प्रजाति छैनन् समावेश यसको प्रावधान को नागरिक कोड को रूसी संघ. यो वकील को शक्ति को प्रत्येक प्रकार छ, अध्ययन गरेर यो संस्था को प्रतिनिधित्व एक पुरा रूपमा. यस मामला मा, को विशेषताहरु को प्रत्येक प्रजाति हामीलाई अनुमति पहिचान गर्न सबैभन्दा रोचक र विशिष्ट क्षण को श्रेणी मा संकेत यो लेखमा । प्रतिनिधि आफ्नो अधिकार, नागरिक क्षेत्रको एक-समय.
एक वकील को शक्ति को यस प्रकार लागि आधार छ मा एक महत्वपूर्ण कदम र अधिक केही छ । अन्य शब्दहरू मा, विशेष कानूनी रूपरेखा सृष्टि भएको हो भनेर अनुमति प्रतिनिधि सीधा काम मा कुनै पनि एक लाइन । उदाहरण को कार्यहरू द्वारा प्रोक्सी को यस प्रकारको छ, यो बिक्री को एक कुरा, रसिद, माल बिक्री, आदि एक पूर्ण विभिन्न प्रकार को प्रतिनिधिमण्डल को अधिकार को एक विशेष प्रकार कागजात । यस्तो शक्तिहरु को वकील पनि छन् भरेको अस्तित्व को सख्त सीमा छ; तथापि, तिनीहरूले मतलब को प्रदर्शन कुनै पनि कार्यहरू लागि समय को एक निश्चित राशि छ । यस्तो दस्तावेज हो लोकप्रिय मा वातावरण को क्रमबद्घ आपूर्ति, माल को वितरण देखि मुद्रा नगद, आदि.
नागरिक कोड, वकील को शक्ति मा जो प्रणाली को प्रमुख संस्थाहरूको अनुमति छैन, एक विस्तृत विश्लेषण को सामान्य प्रतिनिधिमण्डल निश्चित अधिकार र दायित्व । तथापि, अस्तित्व को एक सामान्य प्रजाति, फेरि थियो, मा सिद्धान्त । एक वकील को शक्ति को यस प्रकार को जारी छ क्रम मा एक व्यक्ति को लागि निश्चित गर्न लेनदेन संग सम्पत्ति को प्रक्रिया मा यो प्रबंध. कि छ, हामी कुरा छैन एक लाइन को कार्य, जस्तै को मामला मा विशेष प्रतिनिधिमण्डल, तर बारेमा एउटा विशेष प्रणाली को अधिकार को कार्यान्वयन लागि परिचालन र प्रशासनिक र व्यापारिक उद्देश्य । प्रतिनिधिहरु को यस प्रकारको गर्न स्वतन्त्र छन् निष्कर्षमा पुग्न कुनै पनि ठेके रूपमा राम्रो, कार्यान्वयन गर्न अन्य कानूनी सम्बन्ध को गतिविधिलाई मा वस्तु नियन्त्रण गर्न जिम्मेवारी सुम्पिएका. सामान्य वकील को शक्ति दिन्छ प्रतिनिधिहरु को फराकिलोकालागि सीमा अधिकार । यो विख्यात गर्नुपर्छ भनेर लेख को वकील को शक्ति मा नागरिक कोड को संभावना हस्तांतरण सुम्पिएको अधिकार र जिम्मेवारीहरू । यस्तो एउटा संस्था हो भनिन्छ स्थानान्तरण.
अनुसार आफ्नो प्रावधान, जो एक व्यक्ति छ पहिले नै प्राप्त प्राधिकरण दस्तावेज हस्तान्तरण गर्न सक्छन्, आफ्नो दायित्व र अधिकार तेस्रो पार्टी । अन्य शब्दहरू मा, विषय को कानूनी सम्बन्ध छ प्रतिस्थापन । पुन संस्थान धेरै लोकप्रिय छ आज । तर, आफ्नो अस्तित्व आवश्यक छ, किनभने यो को सार नागरिक व्यवस्था छ । यो संस्था को स्थानान्तरण को अधिकार मा उल्लेख लेख जिम्मेवारीहरू छ बुझे मा एक सरल लिखित रूप.
तर, त्यहाँ छन् को एक नम्बर अवस्थामा जब वकील को शक्ति हुनु पर्छ एक योग्य उपस्थिति छ । एक सूची यस्तो क्षण दिएको छ सिभिल कोड. वकील को शक्ति, त्यसैले, छ जारी एक नम्बर मा निम्न अवस्थामा: सबै अवस्थामा, प्रस्तुत कागजात अधिकार र दायित्व हुनुपर्छ प्रमाणित गरेर एक विशेष अभिलेखमा छ । एक अपेक्षाकृत सानो प्रतिशत ठेके को लागि छ, एक असीमित समय को अवधि । एक नियम को रूप, त्यहाँ छ को एक निश्चित अवधि को मान्यता कुनै पनि कानूनी सम्बन्ध छ । यस प्रत्यायोजित कागजात छैन, एक अपवाद मा यो कुरा रूपमा, नागरिक कोड भन्छन् । यो वकील को शक्ति द्वारा जारी छ सामान्य नियम को लागि छैन भन्दा बढी तीन वर्ष छ । यस मामला मा, यो सही को अवधि यसको वैधता मा निर्दिष्ट हुनु पर्छ ठेक्का नै छ । अन्यथा, यो वकील को शक्ति मात्र एक वर्षका लागि मान्य छ । यो विख्यात गर्नुपर्छ, यो असाधारण महत्त्व विशिष्ट मिति स्थापनाका लागि वकील को एक शक्ति छ । निष्कर्षमा कागजात असम्भव हुनेछ को उपस्थिति बिना यो अपेक्षित छ । धारा को नागरिक कोड अमेरिका मा अभाव को एक मिति, वकील को शक्ति हुनेछ सुन्य र शून्य छ । महत्त्व को साजसज्जा छ कि यो आफ्नो मदत गर्न सक्छन् भनेर सही गणना को मान्यता अवधि को वकील को शक्ति. लागि रूपमा जारी कागजातहरू को आधार मा स्थानान्तरण, आफ्नो अवधि मा कुनै बाटो हुन सक्छ ठूलो, को निर्दिष्ट समय को अवधि को शीर्षक मा काम, छ कि, मुख्य एक छ । त्यसैले, हामी छलफल को मुख्य बुँदाहरू को सम्बन्ध प्रतिनिधिमण्डल थिए, जो लिइएका एक कागजात जस्तै नागरिक कोड को रूसी संघ. यो लेखमा 'वकील को शक्ति' दिए एउटा पूर्ण राशि को स्पष्टीकरण को बारेमा कानूनी सम्बन्ध, साथै संयन्त्रको लागि यसको निर्माण कार्य र समापन.
भर्ती को लागत एक निष्कासन वकील - कानुनी व्यवस्था खेलमा पुस्तकालय
तपाईं छन् भने एक जमींदार, तपाईं सम्झौता संग एक निष्कासनक्रम मा गर्न कानुनी एक मोहि, तपाईं पालन गर्नुपर्छ एक सख्त कानुनी प्रक्रिया छ । धेरै मालिक समय छैन वा ह्यान्डल गर्ने क्षमता निष्कासन कार्यवाही । राज्य मा निर्भर, को जटिलता दाबी र अदालत कार्यवाही, एक निष्कासन वकील खर्च गर्न सक्छन् बीच डलर पाँच सय डलर. तर, राज्य व्यवस्था र आफ्नो पट्टा अनुबंध, वकील शुल्क र लागत मा अदालत । हरेक निष्कासन दाबी फरक छ । केही भाडादारों स्वेच्छाले बाहिर सार्न को एक सम्पत्ति छ । अरूलाई हुन सक्छ चढ्थ्यौं र कारण हुन सक्छ सम्पत्ति क्षति भएको छ । अरूलाई आफ्नै प्राप्त वकिल र निष्कासन लड्न अदालत मा. यी बदलाव गर्न सक्छन् प्रभाव लागत को एक निष्कासन बढ्नु छ । भने एक निष्कासन छ, प्रक्रिया हुनुपर्छ छिटो र अपेक्षाकृत सस्तो छ । तर, भाडादारों हुन सक्छ प्रतिरक्षाको आफ्नो निष्कासन (जस्तै प्रतिकार, गरिब आवास अवस्था, वा भेदभाव). सुनिरहेका यी प्रतिरक्षाको हुनेछ समय र प्रयास परिणामस्वरूप उच्च वकील शुल्क र लागत । धेरै अमेरिका मा, एक मोहि गर्न सक्छन् माग न्यायपीठ परीक्षण मा एक निष्कासन. जुरी परीक्षा सामान्यतया अब लिन र आवश्यकता बढी काम.
किनभने यो वृद्धि जटिलता, आफ्नो वकील गरेको शुल्क र लागत वृद्धि हुन सक्छ. यो कहिलेकाहीं भनिन्छ एक"आत्म-मदत निष्कासन."आफ्नो राज्य निष्कासन नियमहरू र प्रक्रियाहरु, तपाईं लाग्न सक्छ अतिरिक्त लागत र शुल्क.
कहिलेकाहीं, एक जमींदार (वा तिनको अधिवक्ता) विशेषज्ञहरु किराया गर्न व्याख्या को खुलारूपमा सम्पत्ति क्षति वा अन्य विवादित विषयमा छ । यी विशेषज्ञहरु सक्छ चार्ज लागि आफ्नो समय वृद्धि गर्न प्रमुख, लागत । भने (गवाही छ कि द्वारा लिखित एक अदालतले प्रतिवेदक) आवश्यक छन्, प्रतिघण्टा वकील शुल्क पनि हुन सक्छ माथि जान छ । जबकि, सबैभन्दा निष्कासन अवस्थामा सरल छन्, केही भएको धेरै जटिल छ । एक मोहि प्रदान गर्न सक्छ प्रतिरक्षाको र कि परिणाम मा थप कानूनी अनुसन्धान, बारम्बार अदालत सुनवाई, र. लामो समयसम्म कानूनी युद्धमा, यो लागत को आफ्नो निष्कासन उच्च हुनेछ । आफ्नो राज्य आधारमा (र जटिलता को निष्कासन), अदालत लागत हुन सक्छ नम्र वा धेरै महंगा छ । यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ. तपाईंको वकील गरेको शुल्क संरचना एक अनुबंध हस्ताक्षर अघि वा. वकील शुल्क र बिलिङ प्रक्रिया हुन सक्छ देखि नाटकीय भिन्न व्यवस्था कडा व्यवस्था गर्न दृढ छ । सबैभन्दा अचल सम्पत्ति वा निष्कासन वकिल शुल्क या त एक तला वा घन्टाको शुल्क । तला शुल्क निष्कासन वकिल सामान्यतया बीच चार्ज डलर पाँच सय डलर, को लागि एक निष्कासन. यी शुल्क मा निर्भर गर्नेछ, आफ्नो वकील गरेको अनुभव र आफ्नो मामला को जटिलता छ । सम्झना, कम वकील शुल्क छैन सधैं संकेत गरिब-गुणवत्ता प्रतिनिधित्व । एक कुशल वकील ह्यान्डल सक्छ एक निष्कासन चाँडै र सजिलै एक परिणामस्वरूप कम तला शुल्क । वकील चार्ज घन्टाको शुल्क लागि एक किसिम को कारण छ । केही व्यवस्था कम्पनीहरु बस गर्न इच्छुक छैन चार्ज तला शुल्क । अन्य वकिल गर्न सक्छ मा जिद्दी एक घन्टाको शुल्क गर्दा तिनीहरूले आशा विस्तारित मुद्दा छ । प्रतिघण्टा दर भिन्न, आफ्नो स्थान मा निर्भर गर्दछ, यो वकील गरेको अनुभव र पूर्वानुमानित जटिलता को आफ्नो दाबी छ । सामान्यतया, अचल सम्पत्ति वकील चार्ज बीच डलर सय डलर र चार सय एक घण्टा को लागि आफ्नो समय छ । यदि आफ्नो वकील शुल्क एक घण्टाको दर, एक. एक छ, पैसा एक राशि कवर को एक भाग वकील गरेको समय र लागत । एक पटक खर्च भएको छ, वकील हुनेछ बिल एक घन्टा को आधार मा गर्न को लागि अतिरिक्त समय र लागत । दुवै प्रतिघण्टा र तला शुल्क आफ्नो र विपक्ष छ । एक मा धेरै सरल, निष्कासन, एक तला शुल्क हुन सक्छ, अधिक महंगा भन्दा घन्टाको शुल्क. तर, प्रतिघण्टा वकील शुल्क धेरै उच्च हुन सक्छ जटिल. तपाईं पहिले साइन इन शुल्क सम्झौता, प्रश्न सबैभन्दा वकिल छैन शुल्क लागि एक प्रारंभिक परामर्श. यो प्रयोग परामर्श गर्न मौका रूपमा बुझ्न वकील गरेको बिलिङ प्रक्रिया र कसरी उहाँले वा त्यो संभालती मुद्दा छ । निष्कासन महंगा छन्. यसबाहेक, वकील शुल्क र अदालत लागत, तपाईं को लागि जिम्मेवार हुन सक्छ मुद्दा लागत सहित, विशेषज्ञ साक्षी र बयान शुल्क. यसबाहेक, यी लागत समावेश छैन को लागत हराएको भाडा, सम्पत्ति क्षति, र मरम्मत. निष्कासन लिन समय र प्रयास हो ।, आफ्नो राज्य निष्कासन प्रक्रिया, तपाईं सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ अतिरिक्त लागत गर्न । लागि थुप्रै मालिक, राखने एउटा निष्कासन वा अचल सम्पत्ति वकील एक बुद्धिमान् लगानी छ ।.
वकील को शक्ति. तयार गर्न कसरी विशेष वकील को शक्ति मा यूएई - वकील को शक्ति दुबई
त्यहाँ भएको छ एक धेरै को प्रयोग को लागि वकील को एक शक्ति छ । यो काम गर्न आउँदा यो कसैले अरू के कार्यहरू जब तपाईं को लागि असक्षम हुन्छन् गरिरहेको तिनीहरूलाई लागि समय भइरहेको छ । मूलतः, एक गर्न आवश्यक छ ज्ञान छ के मा एक वकील को शक्ति बारेमा सबै छघटना मा छ कि तपाईं सहज छैन वा विश्वस्त मा हैंडलिंग को यस प्रकारको सधैं छन्, अख्तियारको लिखित दस्तावेज दिएको कसैले (प्रमुख) अर्को व्यक्ति (एजेन्ट) दिन्छ कि उत्तरार्द्ध को शक्ति को तर्फबाट कार्य गर्न पूर्व सन्दर्भमा कानूनी मामिलामा । यो तिनीहरुका महत्त्व यद्यपि भन्ने मुख्य दिने वकील को शक्ति छ भन्दा बीस-एक वर्ष को उमेर र एक ध्वनि मन. यो मूलतः प्रयोग गर्दा एक प्रमुख आवश्यकता एक एजेन्ट मा काम गर्न आफ्नो तर्फबाट ह्यान्डल गर्न कानूनी, वित्तीय, वा सम्पत्ति लेनदेन गर्दा प्रमुख हाल उपलब्ध छैन या भएर देश बाहिर छ । कि घटना मा एक प्रमुख आवश्यकता एक एजेन्ट किनभने तिनीहरूले असक्षम बनाउने निर्णय (भइरहेको अचेत, मानसिक अयोग्य, शारीरिक असमर्थ, आदि), अदालतले प्राप्त हुन सक्छ आफूलाई संलग्न द्वारा आदेश एक कानूनी संरक्षणको वा लागि मुख्य आवश्यकता हो, जो प्रतिनिधित्व । एक एजेन्ट शक्ति छ व्यवस्थापन कुराहरू आवश्यकता छ भनेर व्यवहार गर्न मा एक प्रमुख गरेको तर्फबाट गर्दा एजेन्ट एक सामान्य वकील को शक्ति. यो केवल समय को एक अवधि जब प्रमुख देश बाहिर छ वा आफ्नो शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य सम्झौता छ । यसको नाम साँचो, एक सामान्य वकील को शक्ति छ. एक व्यापक सूची कुराहरू दिन एक एजेन्ट को एक सीमा शक्तिहरु र जिम्मेवारी हो कि (तर सीमित छैन) सामान्यतया निम्न छन्: एक एजेन्ट दिइएको छ एक अख्तियार ह्यान्डल गर्न छ एक विशिष्ट मामला को एक प्रमुख संग एक विशेष वकील को शक्ति दुबई हात छ । यो महत्त्वपूर्ण महत्त्व स्पष्ट निर्दिष्ट गर्दछ कि तपाईं को इच्छा को लागि आफ्नो एजेन्ट प्रदर्शन गर्न आफ्नो तर्फबाट भएकोले विशेष वकील को शक्ति सीमित छ, ती केही कार्यहरू मा लेखिएको कागजात मात्र । एक विशेष वकील को शक्ति द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ एक प्रबंधक दिन शक्तिहरु एक एजेन्ट मा पूर्व गरेको तर्फबाट गर्दा प्रमुख गिर हुनेछ बिरामी, अशक्त, बाहिर यात्रा लागि, वा बस असमर्थ व्यवस्थापन गर्न एक निश्चित कार्य हो । स्थायी वकील को शक्ति थियो सिर्जना अन्तर्गत मानसिक क्षमता ऐन अन्तर्गत अंग्रेजी व्यवस्था, इङ्गल्याण्ड र वेल्स र कार्यान्वयन मा. मूलतः, यो कवर गर्न सक्छन् जो मानिसहरू हेर्न भविष्यमा शारीरिक वा मानसिक सक्षम गरिरहेको को आफ्नै व्यक्तिगत, आर्थिक, वा व्यापार मामिला हो । यो प्रयोग गर्न को लागि व्यवस्था गर्न तिनीहरूलाई नियुक्त सदस्य आफ्नो परिवार वा मित्र बनाउन निर्णय तर्फबाट तिनीहरूलाई छ । आवश्यक कागजातहरू लागि वकील को शक्ति मस्यौदा पर्छ सबै तयार. विभिन्न शक्ति को वकीलहरु हुन सक्छ व्यक्तिगत वा अतिरिक्त आवश्यकताहरु । एक उदाहरणका लागि, एक वकील को शक्ति प्रयोग गरिन्छ कि बिक्रीको लागि एक सम्पत्ति आवश्यक थप कागजात छ कि मूल शीर्षक काम । तथापि, कम्पनीहरु छ कि प्रदान यो वकील को शक्ति नै पूरा गर्न सकिन्छ द्वारा एक टाइप केन्द्र, र कागजात हुनुपर्छ दुवै मा फ्रेन्च र अंग्रेजी । यो मुद्रांकन र समय मा कुनै पनि बिंदु, प्रमुख वा प्रबंधक रद्द गर्न सक्छन् शक्ति अधिवक्ता दुबई भनेर उहाँले दिइएको छ जब, उहाँले. यो वकील को शक्ति दिइएको एक एजेन्ट हुनेछ रद्द मा मृत्यु को प्रबंधक भएकोले यूएई कुनै व्यवस्था सन्दर्भमा स्थायी वकील को शक्ति पनि भने, वकील को शक्ति को लागि बनाएको छ एक निश्चित समय सीमा मात्र, यो स्वतः समाप्त जब अवधि आउँछ ।.
बौद्धिक सम्पत्ति वकील दुबई - ट्रेडमार्क दर्ता मा यूएई - बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार
बौद्धिक सम्पत्ति बुझाउँछ सिर्जनाहरू को मन मा: आविष्कार साहित्यिक र कलात्मक कामहरू, र प्रतीक, नाम, र तस्बिरहरू प्रयोग कमर्स. बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्था संग सम्झौता को नियम लागि सुरक्षित र प्रचलनमा कानूनी अधिकार आविष्कार, डिजाइन, र कलात्मक काम गर्दछ । ट्रेडमार्क सेवा मा जीसीसी जताततै छन् किनभने मध्य पूर्व ट्रेडमार्क दर्ता सधैं माथि जा पछि धेरै छन् लगानीकर्ताले मा आउँदै छन्, विशेष गरी देश मा
संयुक्त अरब इमिरेट्स ट्रेडमार्क दर्ता सेवाहरू उपलब्ध छन् कि देश मा छ कि सुनिश्चित गर्न सक्छन् आफ्नो एकदम सजिलो छ, अझै एक बिट जटिल छ जब तपाईं छैनन् उद्योग मा पर्याप्त लामो छ । को एक नम्बर छन् कि प्रक्रियाहरु हौं मा ट्रेडमार्क दर्ता यूएई मा.
जब तपाईं संग परिचित छैनन् प्रक्रिया, यो एकदम गाह्रो सामना गर्न एक्लै । किन कि त्यहाँ छन् ट्रेडमार्क सलाहकार गर्न सक्छन् भनेर तपाईं यस संग मदत. को लागि लागू गर्दा, एक ट्रेडमार्क दर्ता मा दुबई वा कुनै पनि देश को भाग, यी कदम हो लिएका गर्नुपर्छ भनेर लागि यूएई मा ट्रेडमार्क दर्ता: को एक नम्बर छन् कि प्रक्रियाहरु हौं मा ट्रेडमार्क दर्ता यूएई मा. जब तपाईं संग परिचित छैनन् प्रक्रिया, यो एकदम गाह्रो सामना गर्न एक्लै । किन कि त्यहाँ छन् ट्रेडमार्क सलाहकार गर्न सक्छन् भनेर तपाईं यस संग मदत. को लागि लागू गर्दा, एक ट्रेडमार्क दर्ता मा दुबई वा कुनै पनि देश को भाग, यी कदम हो त्यो गर्नुपर्छ लिएको लागि यूएई मा ट्रेडमार्क दर्ता: तपाईं छ भने एक दर्ता यूएई ट्रेडमार्क, तपाईं यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ को एक फारम को रूप सुरक्षा । तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् ऋण बैंक देखि आफ्नो ट्रेडमार्क रूपमा जमानत को केही प्रकारको छ किनभने यो रूपमा छलफल भएको एक सुरक्षा छ । प्रयोग गर्नुको सट्टा अरू केही प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो ट्रेडमार्क छ । एक व्यवसाय छ कि एक कानूनी ट्रेडमार्क मा दुबई वा ट्रेडमार्क यूएई मा छ कि सुनिश्चित गर्न सक्छन्, एकदम चिल्लो र सजिलो संग व्यवहार बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको को विकास को लागि कि व्यापार । एक व्यवसायी हुनेछ मा विशेष अधिकार प्रयोग गरेर यसको ट्रेडमार्क प्रतिनिधित्व कि यसको सामान वा सेवा गर्दा यो लिन्छ ब्रान्ड दर्ता यूएई मा. यो सुनिश्चित गर्न सक्छन् कि अरू कोही होइन यो प्रयोग हुनेछ कि घटना मा ट्रेडमार्क विवाद वा प्रतिलिपि विवाद खडा, तपाईं शक्ति छ मुद्दा छन् किनभने तपाईं कानूनी मालिक को भन्नुभयो मार्क. जब तपाईं को संरक्षण भएको कानुनी भइरहेको ट्रेडमार्क दर्ता मा दुबई, यो देखाउन सक्छौं आफ्नो विश्वसनीयता र लगानीकर्ताले यो पाउनुहुनेछ तपाईं साँच्चै वैध छ । ब्रान्ड दर्ता यूएई मा छ कि सुनिश्चित गर्न सक्छन् अरू कोही होइन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मार्क, र यो हुनेछ भन्ने सुनिश्चित हुनेछ कुनै हानि गर्न आफ्नो प्रतिष्ठा, ब्रान्ड, वा व्यापार नै हो । तपाईं एक दर्ता यूएई ट्रेडमार्क, तपाईं यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ को एक फारम को रूप सुरक्षा । तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् ऋण बैंक देखि आफ्नो ट्रेडमार्क रूपमा जमानत को केही प्रकारको छ किनभने यो रूपमा छलफल भएको एक सुरक्षा छ । प्रयोग गर्नुको सट्टा अरू केही प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो ट्रेडमार्क छ । एक व्यवसाय छ कि एक कानूनी ट्रेडमार्क मा दुबई वा ट्रेडमार्क यूएई मा छ कि सुनिश्चित गर्न सक्छन्, एकदम चिल्लो र सजिलो संग व्यवहार बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको को विकास को लागि कि व्यापार । एक व्यवसायी हुनेछ मा विशेष अधिकार प्रयोग गरेर यसको ट्रेडमार्क प्रतिनिधित्व कि यसको सामान वा सेवा गर्दा यो लिन्छ ब्रान्ड दर्ता यूएई मा. यो सुनिश्चित गर्न सक्छन् कि अरू कोही होइन यो प्रयोग हुनेछ कि घटना मा ट्रेडमार्क विवाद वा प्रतिलिपि विवाद खडा, तपाईं शक्ति छ मुद्दा छन् किनभने तपाईं कानूनी मालिक को भन्नुभयो मार्क. जब तपाईं को संरक्षण भएको कानुनी भइरहेको ट्रेडमार्क दर्ता मा दुबई, यो देखाउन सक्छौं आफ्नो विश्वसनीयता र लगानीकर्ताले हुनेछ, यो पाउन तपाईं साँच्चै वैध छ । ब्रान्ड दर्ता यूएई मा छ कि सुनिश्चित गर्न सक्छन् अरू कोही होइन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मार्क, र यो हुनेछ भन्ने सुनिश्चित हुनेछ कुनै हानि गर्न आफ्नो प्रतिष्ठा, ब्रान्ड, वा व्यापार नै हो । वकील कानूनी सलाहकार को एक अग्रणी ट्रेडमार्क दर्ता कम्पनीहरु दुबई मा छ । हाम्रो टीम दावा छ वैश्विक विशेषज्ञता, स्रोतहरू, र प्रविधिको मा आकर्षित गर्न रणनीति सन्दर्भमा मुद्दाहरू संग बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार को आफ्नो संगठन छ । हामी बुझ्न भनेर सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्ति एक प्रमुख सफलता को आफ्नो संगठन छ । भइरहेका सबै भन्दा राम्रो को एक ट्रेडमार्क मुद्दा वकिल, को यूएई मा संग ब्रान्ड र ट्रेडमार्क दर्ता मा सार्जाह, ट्रेडमार्क दर्ता मा अबू धाबी, र हरेक देश को भाग, हामी सुनिश्चित कि सबै भन्दा राम्रो गुणवत्ता सेवा दिइएको छ, प्रत्येक व्यक्ति । ब्रान्ड र ट्रेडमार्क दर्ता यूएई मा सजिलै संग सम्हाल्न गरेर हामीलाई किनभने हामी निर्णायक र अप-टु-मिति बारेमा जानकारी उद्योग र विशाल ज्ञान बारे बौद्धिक सम्पत्ति कानून.
तर, अलग देखि दुबई ट्रेडमार्क दर्ता, हामी पनि हेरविचार को ट्रेडमार्क मुद्दा प्रक्रिया र ट्रेडमार्क मुद्दा अवस्थामा छ । हामी सधैं सहयोग गर्न तयार तपाईं संग को दर्ता ट्रेडमार्क र पेटेंट, मुद्दा, हानि कुनै वस्तुको मूल्य, लाइसेन्स, बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, र यति मा । वकील कानूनी सलाहकार को एक अग्रणी ट्रेडमार्क दर्ता कम्पनीहरु दुबई मा छ । हाम्रो टीम दावा छ वैश्विक विशेषज्ञता, स्रोतहरू, र प्रविधिको मा आकर्षित गर्न रणनीति सन्दर्भमा मुद्दाहरू संग बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार को आफ्नो संगठन छ । हामी बुझ्न भनेर सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्ति एक प्रमुख सफलता को आफ्नो संगठन छ । भइरहेका सबै भन्दा राम्रो को एक ट्रेडमार्क मुद्दा वकिल, को यूएई मा संग ब्रान्ड र ट्रेडमार्क दर्ता मा सार्जाह, ट्रेडमार्क दर्ता मा अबू धाबी, र हरेक देश को भाग, हामी सुनिश्चित कि सबै भन्दा राम्रो गुणवत्ता सेवा दिइएको छ, प्रत्येक व्यक्ति । ब्रान्ड र ट्रेडमार्क दर्ता यूएई मा सजिलै संग सम्हाल्न गरेर हामीलाई किनभने हामी निर्णायक र अप-टु-मिति बारेमा जानकारी उद्योग र विशाल ज्ञान बारे बौद्धिक सम्पत्ति कानून.
तर, अलग देखि दुबई ट्रेडमार्क दर्ता, हामी पनि हेरविचार को ट्रेडमार्क मुद्दा प्रक्रिया र ट्रेडमार्क मुद्दा अवस्थामा छ । हामी सधैं सहयोग गर्न तयार तपाईं संग को दर्ता ट्रेडमार्क र पेटेंट, मुद्दा, हानि कुनै वस्तुको मूल्य, लाइसेन्स, बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, र यति मा ।.
र वकील को शक्ति को लागि वाहन लेनदेन - सेवा मा यूएई
वाहन को मालिक
वकील को एक शक्ति लागि सवारी साधन लेनदेनपनि ज्ञात एक ओटो वकील को शक्ति वा वाहन वकील को शक्ति. छ भनेर दस्तावेज आफ्नो एजेन्ट हुन सक्छ जसले आफ्नो परिवारको सदस्य वा एक मित्र को तर्फबाट कार्य गर्न सम्बन्ध मा तपाईं आफ्नो वाहन । एक ओटो वकील को शक्ति दिन सक्छ आफ्नो एजेन्ट मात्र विशिष्ट शक्तिहरु यस्तो कार मर्मतका वा अख्तियार गर्न लगभग केहि पनि तपाईं के गर्न सक्छ भने तपाईं उपस्थित थिए सहित. खरीद र बिक्री गाडी । यस कारण लागि. यो समीक्षा गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ आफ्नो वाहन र समावेश गर्न मात्र ती शक्तिहरु कि तपाईं इरादा प्रदान गर्न छ । अर्को परिदृश्य जहाँ एक ओटो प्रयोग गर्न सकिन्छ जब तपाईं इच्छा गर्न उधारो गर्न आफ्नो वाहन मा कसैले आफ्नो परिवार. आफ्नो मित्र वा अन्य कुनै जानकारी हस्तांतरण बिना आफ्नो वाहन को शीर्षक छ । जब तपाईं रूपमा. छैन शारीरिक उपलब्ध ठाउँ मा वाहन बेच भइरहेको छ. सकिन्छ एक सुविधाजनक उपकरण बेच्न र स्थानान्तरण को शीर्षक छ. आफ्नो वाहन को माध्यम आफ्नो एजेन्ट छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स मा. एक वाहन वकील को शक्ति छ हुन मुख्यतया अरबी संग आधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद रूपमा. एक विकल्प छ र यो हुन मा नोटरी सार्वजनिक । यदि कागजात जारी छ बाहिर यूएई. त्यसपछि यो हुन छ र साक्ष्यांकित द्वारा विदेशी मामिला विभाग र युएई दूतावास मा देश को मूल र विदेशी मामिला मंत्रालय को यूएई.
अरबी अंग्रेजी ठेके
ठेके अरब प्रदान गर्दछ छिटो र सजिलो पहुँच गर्न, वास्तविक अनुबंध मा प्रयोग लेनदेन कवर सबै उद्योग । हाम्रो डेटाबेस को अनुबंध प्रदान प्रतिस्पर्धी बुद्धि र सन्दर्भ मामला लागि व्यापार पेशेवरों वा वकिल एक सम्झौता वा एक सम्झौता मस्यौदा कवर को विभिन्न प्रकार को लेनदेन यस्तो रोजगार अनुबंध, प्रविधिको लाइसेन्स अनुबंध, वित्तीय अनुबंध र धेरै अधिकतपाईं ब्राउज गर्न सक्छन् माध्यम ठेके अरब निर्देशिका र पूर्वावलोकन अनुबंध मुक्त लागि. डलर. पहुँच गर्न एक सम्झौता मात्र पछि तपाईं खरीद गर्ने निर्णय. ठेके अरब आयोजित सबै लेनदेन प्रयोग एक सुरक्षित सर्भर रोजगार एक उद्योग मानक गुप्तिकरण योजना भनिन्छ. को भाग रूपमा क्रेडिट कार्ड भुक्तानी, लागि खडा कार्ड प्रमाणिकरण मूल्य र छ पनि रूपमा चिनिएको कार्ड सुरक्षा कोड छ । यो बढाउँछ सुरक्षा को क्रेडिट कार्ड खरिद.
को पूरा पछि खरिद सम्झौता, तपाईं डाउनलोड गर्न सक्छन् सम्झौता तुरुन्तै देखि खरीद पृष्ठ वाहेक, तपाईं एक सन्देश प्राप्त गर्न आफ्नो ई-मेल युक्त एक डाउनलोड लिंक सम्झौता तुरुन्तै । अनुबंध डाउनलोड माध्यम ठेके अरब हो.
यसको मतलब यो हो कि वर्ड प्रोसेसिङ कार्यक्रम जस्तै शब्द, र अरूलाई गर्नुपर्छ ठीक ढाँचा सबै कागजातहरू डाउनलोड र संग तपाईं प्रदान गर्न एक कागजात छ कि सजिलै सम्पादन हुनेछ । डाउनलोड गर्न वा प्राप्त अनुबंध देखि एक पछिल्लो क्रम मा क्लिक, डाउनलोड अघिल्लो क्रम लिंक अन्तर्गत 'आफ्नो खाता' मा. यो तपाईं हुनेछ एक पृष्ठ सूची कि आफ्नो पछिल्लो आदेश छ । नोट, - अनुबंध । पूर्वावलोकन प्रदान को सम्झौता हुन डाउनलोड संग तपाईं प्रदान गर्न एक विचार को प्रकार को मुद्दाहरू र प्रावधान समेटिएको मा पूर्ण सम्झौता । प्रकाशित प्रावधान छन् जो संकेत को गहिराई र कवरेज को मामला मा प्रदान पूर्ण सम्झौता, तर, पूर्वावलोकन हुन इरादा छैन एक पूर्ण हेर्नुहोस् को पूर्ण सम्झौता ।.
तपाईं एक गुनासो फाइल विरुद्ध आफ्नो वकील
पेशेवरों रूपमा, वकीलहरु आयोजना गर्न निश्चित स्तर । यी बीचमा छन् जिम्मेवारीहरू लागि नैतिक आचरण र व्यावसायिक क्षमता छ । जब एक वकील उल्लङ्घन यी स्तर, तिनीहरूले अनुशासन गर्न विषय छ । किन कि छयो मात्र सम्भव छ, तर पनि आवश्यक लागि तपाईं विरुद्ध गुनासो फाइल गर्न एक वकील को घटना मा व्यावसायिक आचरणमा. उद्देश्य यस्तो अनुशासन छ रोक्न आचरणमा फेरि भइरहेको देखि. यसबाहेक, यो शास्त्रीय सिस्टम गर्न मदत गर्छ स्तर सेट लागि अधिवक्ता व्यवहार । तर, यी शास्त्रीय गर्न हर्जाना को. यदि यो थियो केही तरिका द्वारा क्षतिग्रस्त आफ्नो वकील, त्यसपछि तिनीहरूले पनि गर्नुपर्छ खोज्न उपचार भर्ती गरेर अर्को वकील अन्वेषण गर्न वा छैन गर्न कुरा लिन नागरिक कोर्ट । अधिकांश मानिसहरू मात्र हुनेछ किराया कानूनी सल्लाह मा दुर्लभ अवसरमा. यसबाहेक, कानूनी मामिलामा हुन गर्छन घेरिएको धेरै भावनात्मक मुद्दाहरू । यो संयोजन र एक भावनात्मक चार्ज वातावरण र असमझदारी छ । त्यसैगरी, यो डरलाग्दो छ भनेर बुझ्न शास्त्रीय कार्य छ छैन सधैं उपयुक्त बुझयो द्वारा पल्ट एसोसिएशन. जबकि तपाईं हुन सक्छ दुखी को परिणाम संग आफ्नो मामला वा महसुस भनेर आफ्नो वकील थिएन रक्षा तपाईं रूपमा खसराजा सकेसम्म, यो जरूरी होइन कि वकिल अनुचित वा. एक कुरा को लागि बार एसोसिएसनले निर्णय गर्न । तथापि, तपाईं गर्न सक्छन् आफ्नो भाग दाखिल द्वारा उजुरी पल्ट एसोसिएशन.
बारम्बार, तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ, उपयुक्त निर्देशन मा आफ्नो राज्य पल्ट एसोसिएशन.
केही पल्ट संगत प्रदान फारम पूरा गर्न सकिन्छ र पेश गर्दा अरूलाई सोध्नुहोस् कि तपाईं को एक पत्र लेख्न बताउँदै तथ्य को आफ्नो गुनासो छ । भएको आफ्नो हस्ताक्षर र मा पठाउन कुनै पनि लेखोटहरूको समर्थन कि तपाईंको गुनासो गर्दै दुवै राम्रो विचार छ । किनभने यो प्रक्रिया लागि दाखिल गुनासो भिन्न राज्य देखि राज्य को लागि, यो महत्त्वपूर्ण छ ध्यान गर्न निर्देशन समीक्षा वेबसाइट मा.
यो पनि एक राम्रो विचार हुन कल गर्न पट्टी संघ संग कुनै प्रश्न पेश गर्नु अघि आफ्नो कागजी. वकिल आयोजना गर्न उच्च स्तर को व्यावसायिक योग्यता र आचरण हो । एक वकील उल्लङ्घन भएको छ, यी स्तर, त्यसपछि दाखिला गुनासो छ एक आवश्यक पहिलो चरण तिर सुल्झाउने कुरा हो ।.
अरब सम्बन्धविच्छेद वकिल, संयुक्त राज्य अमेरिका मा
भित्र चालीस-आठ घण्टा हामी पेश हुनेछ आफ्नो कानूनी मुद्दा गर्न लाइसेन्सपूर्व-जांच अरब सम्बन्धविच्छेद वकिल. संयुक्त राज्य अमेरिका मा जो खेलमा आफ्नो खोज मापदण्ड छ । हामी जाँच लाइसेन्स को वकीलहरु जसलाई हामी जडान संग ग्राहकहरु एक पटक एक वर्ष र तिनीहरूलाई आवश्यकता कायम गर्न एक शून्य-खराब आचरणमा रेकर्ड संग राज्य एजेन्सी आफ्नो लाइसेन्स । कृपया याद गर्नुहोस् कि यो अधीनमा छैन बनाउन एक वकील-ग्राहक संचार । वकील-ग्राहक सम्बन्ध गठन गरेको छ केवल जब. वकील औपचारिक सहमत तपाईं प्रतिनिधित्व गर्न. दिने अनुमति वकीलहरु खेलमा हामी तपाईं संग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं एक अरब वकील र अभ्यास सम्बन्धविच्छेद संयुक्त राज्य अमेरिका मा? प्रकाशित आफ्नो.
सम्पत्ति अधिकार सूचकांक मा संयुक्त अरब इमिरेट्स
वा मदत लागि हामीलाई सम्पर्क प्राप्त जानकारी विश्लेषण र सम्पत्ति देखि प्रदान संसारको आवासीय बजार
साउदी अरब गाइड: वैवाहिक सम्बन्धविच्छेद, मुसलमान विवाह: हुनत खाडी अरब हो
तापनि खाडी अरब हकदार छन् विवाह गर्न रूपमा चाँडै रूपमा, तिनीहरूले पुग्न यौवन, औसत उमेर मा जो मानिसहरू विवाह बढेको छ हालैका वर्षहरूमा मा धेरै मात्रमा, वरिपरिपरंपरागत, आदर्श विवाह थियो जनजाति, सम्बन्धित परिवार उत्साहजनक आफ्नो सन्तानको विवाह गर्न चचेरे वा अन्य नातेदार वृद्धि गर्न र बलियो जनजाति, वा कहिले काँही विवाह गर्न अर्को मा कुल क्रममा निको परिवार छ । अर्को कारण लागि यस्तो विवाह थियो कि परिवार थाह पृष्ठभूमि को साथी । रूपमा छ भने मामला मा केही ल्याटिन देशहरुमा, जवान दम्पतीले मा क्षेत्र अनुमति पूरा गर्न को सावधान आँखा अन्तर्गत एक.
केही खाडी समाजमा, तर, विवाह व्यवस्थित बिना कुनै पनि भाग को महिला साथी गरेको शरीर (सहित उनको अनुहार) भएको देखेको गरेर भावी दुलहा, जो भर पर्छ रिपोर्ट को आफ्नो महिला नातेदार रूपमा आफ्नो पत्नीको उपस्थिति छ । त्यहाँ तीन मुख्य तत्व मा एक अरब विवाह । पहिलो, दुलहा छलफल हुनुपर्छ र सहमत दाइजो संग दुलहीको पिता थिए । यो समावेश हुन सक्छ सुन, जौहरी र वस्त्र र सामान्यतया धेरै मूल्य को.
पछि दाइजो बन्दोबस्त आउँछ वास्तविक विवाह अनुबंध छ, जो द्वारा आयोजित एक कानूनी वा धार्मिक प्रतिनिधि । दुल्हन छ सोधे को अभाव मा भावी दुलहा भने त्यो गर्न सहमत विवाह र यो प्रश्न त राखे दुलहा छ । पछि सम्झौता, दुलहा संग हात जुडती आफ्नो भविष्य ससुरा र दुई संग, साक्षी वर्तमान, विवाह हुन्छ, अधिकारीले भने । तर, त्यहाँ अर्को चरण अघि दम्पतीले वास्तवमा पूरा रूपमा मानिस र पत्नी: विवाह पार्टी । समारोह हो अलग, संग महिलाहरु मा एक खण्ड को घर र पुरुष मा अर्को । अन्तमा, अन्तिम रात को समारोह, यो जोडी पूरा, द्वारा सबै आफ्नो मित्र छ, र अन्ततः छोड्न मा आफ्नो सुहागरात. मा आफ्नो फिर्ती मा, तिनीहरूले या त घर सेट संग दुलहा गरेको आमाबाबु र सदस्य बन्न को विस्तारित परिवार वा रूपमा - झन् मामला - घर सेट अप गरेर आफूलाई । अनुसार व्यवस्था, एक मुसलमान मानिस हुन सक्छ चार पत्नीहरू, प्रदान कि त्यो हेर्न सक्छन् तिनीहरूलाई पछि भौतिक र तिनीहरूलाई व्यवहार उत्तिकै छ । यो अभ्यास अब मर्ने बाहिर, तर, मात्र छैन किनभने मात्र केही यो खर्च गर्न सक्छन्, तर पनि किनभने महिला हुँदै गइरहेका छन् अधिक स्वतन्त्र र दाबी र धेरै इन्कार यो स्वीकार । वास्तवमा, एक मुसलमान महिला सम्मिलित गर्न सक्छन् एक खण्ड मा विवाह ठेक्का पतिले देखि विवाह अर्को महिला लागि रूपमा लामो अनुबंध मान्य छ. पत्नी पनि कायम उनको आफ्नै नाम पछि विवाह । तापनि, लिङ्ग भूमिकाहरूको छ, सधैं स्पष्ट परिभाषित मा इस्लामी दुनिया, मानिस संग रूपमा 'प्रो' र स्त्रीको रूपमा, दुवै मानिस र पत्नी छन् झन् बाहिर गएर काम गर्न हुनत यो, छ, धेरै कम साधारण साउदी अरब, त्यहाँ छन् जहाँ प्रतिबन्धको मा महिला काम मा बाहेक, 'स्वीकार्य' पेसा यस्तो औषधी र शिक्षा. तर, धेरै साउदी मानिसहरू विवाह गर्न हिचकिचाउने डाक्टर र नर्स, जो गर्न उजागर गरिएको छ पुरुष शरीर । एक मानिस आफ्नो पत्नी छोडपत्र गरेर बस 'भन्दै म छोडपत्र तपाईं' तीन पटक । उहाँले सम्बन्धविच्छेद भने यो मा गरेको थियो यो गर्मी को क्षण, तर केवल भने पत्नी सहमत (र मात्र तीन अवसरमा.). जी. यदि पतिले भएको छ अविश्वासी, दुरुपयोग वा वीरान उनको, या मा लगी आपराधिक गतिविधि), त्यो गर्न पर्छ एक लागि अदालत मामला सुने गर्न. पति कायम हुनुपर्छ एक तलाकशुदा पत्नी र कुनै पनि छोराछोरी देखि विवाह भने पत्नी असमर्थ छ समर्थन गर्न आफु उहाँले दाबी गर्न सक्छन् जिम्मा कुनै पनि छोराहरू जब तिनीहरू पुग्न उमेर को दस । एक महिला सामान्यतया लाभ उनको परिवार, र केही. हुनत एक मुस्लिम महिला हुन सक्छ, विवाह छैन एक गैर-मुसलमान मानिस नभएसम्म उहाँले धर्मान्तरित इस्लाम, उल्टो मामला छैन.
तथापि, गैर-मुसलमान महिला अक्सर दबाव मा परिवर्तित, र त्यहाँ भएको धेरै अवस्थामा विदेशी महिला विवाह अरब र त्यसपछि खोज स्थानीय संस्कृति र जीवनशैली हो रोकटोक.
यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने घटना मा, को बिरामी यस्तो संघ, छोराछोरीलाई सामान्यतया राखिएको द्वारा पति मा आफ्नो घर देश । प्रवासी कामदारहरूको सामान्यतया विवाह हुन खाडी मा प्रदान, तिनीहरूले पूरा कि नागरिक र धार्मिक आवश्यकताहरु को लागि आफ्नो घर देश । दूतावास र वाणिज्य दुतको कार्यालय कर्मचारी कहिलेकाहीं प्रदर्शन नागरिक विवाह समारोहको आयोजना, फेरि प्रदान भनेर निश्चित आवश्यकताहरु भेट गर्दै । धार्मिक समारोहको आयोजना व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, तर केवल देश मा अनुमति कि चर्च वा यस्तै गैर-मुसलमान ठाउँमा को उपासना छ । यो मामला छैन साउदी अरब मा.
यदि मान्छे को विभिन्न, विवाह अधिकारीहरूले कहिलेकाहीं जाँच्नै परिस्थितिमा सुनिश्चित गर्न कि विवाह को सुविधा छैनन् ठाँउ लिएर गर्न अध्यागमन आवश्यकताहरु । परंपरागत, आदर्श विवाह थियो जनजाति, सम्बन्धित परिवार उत्साहजनक आफ्नो सन्तानको विवाह गर्न चचेरे वा अन्य नातेदार वृद्धि गर्न र बलियो जनजाति, वा कहिले काँही विवाह गर्न अर्को मा कुल क्रममा निको परिवार छ । अर्को कारण लागि यस्तो विवाह थियो कि परिवार थाह पृष्ठभूमि को साथी । रूपमा छ भने मामला मा केही ल्याटिन देशहरुमा, जवान दम्पतीले मा क्षेत्र अनुमति पूरा गर्न को सावधान आँखा अन्तर्गत एक. केही खाडी समाजमा, तर, विवाह व्यवस्थित बिना कुनै पनि भाग को महिला साथी गरेको शरीर (सहित उनको अनुहार) भएको देखेको गरेर भावी दुलहा, जो भर पर्छ रिपोर्ट को आफ्नो महिला नातेदार रूपमा आफ्नो पत्नीको उपस्थिति छ । त्यहाँ तीन मुख्य तत्व मा एक अरब विवाह । पहिलो, दुलहा छलफल हुनुपर्छ र सहमत दाइजो संग दुलहीको पिता थिए । यो समावेश हुन सक्छ सुन, जौहरी र लुगा र सामान्यतया धेरै मूल्य को. पछि दाइजो बन्दोबस्त आउँछ वास्तविक विवाह अनुबंध छ, जो द्वारा आयोजित एक कानूनी वा धार्मिक प्रतिनिधि । दुल्हन छ सोधे को अभाव मा भावी दुलहा भने त्यो गर्न सहमत विवाह र यो प्रश्न त राखे दुलहा छ । पछि सम्झौता, दुलहा संग हात जुडती आफ्नो भविष्य ससुरा र दुई संग, साक्षी वर्तमान, विवाह हुन्छ, अधिकारीले भने । तर, त्यहाँ अर्को चरण अघि दम्पतीले वास्तवमा पूरा रूपमा मानिस र पत्नी: विवाह पार्टी । समारोह हो अलग, संग महिलाहरु मा एक खण्ड को घर र पुरुष मा अर्को । अन्तमा, अन्तिम रात को समारोह, यो जोडी पूरा, द्वारा सबै आफ्नो मित्र छ, र अन्ततः छोड्न मा आफ्नो सुहागरात. मा आफ्नो फिर्ती मा, तिनीहरूले या त घर सेट संग दुलहा गरेको आमाबाबु र सदस्य बन्न को विस्तारित परिवार वा रूपमा - झन् मामला - घर सेट अप गरेर आफूलाई । अनुसार व्यवस्था, एक मुसलमान मानिस हुन सक्छ चार पत्नीहरू, प्रदान भनेर उहाँले तिनीहरूलाई पछि हेर्न भौतिक र तिनीहरूलाई व्यवहार उत्तिकै छ । यो अभ्यास अब मर्ने बाहिर, तर, मात्र छैन किनभने मात्र केही यो खर्च गर्न सक्छन्, तर पनि किनभने महिला हुँदै गइरहेका छन् अधिक स्वतन्त्र र दाबी र धेरै इन्कार यो स्वीकार । वास्तवमा, एक मुसलमान महिला सम्मिलित गर्न सक्छन् एक खण्ड मा विवाह ठेक्का पतिले देखि विवाह अर्को महिला लागि रूपमा लामो अनुबंध मान्य छ.
पत्नी पनि कायम उनको आफ्नै नाम पछि विवाह । तापनि, लिङ्ग भूमिकाहरूको छ, सधैं स्पष्ट परिभाषित मा इस्लामी दुनिया, मानिस संग रूपमा 'प्रो' र स्त्रीको रूपमा, दुवै मानिस र पत्नी छन् झन् बाहिर गएर काम गर्न हुनत यो, छ, धेरै कम साधारण साउदी अरब, त्यहाँ छन् जहाँ प्रतिबन्धको मा महिला काम मा बाहेक, 'स्वीकार्य' पेसा यस्तो औषधी र शिक्षा.
तर, धेरै साउदी मानिसहरू विवाह गर्न हिचकिचाउने डाक्टर र नर्स, जो गर्न उजागर गरिएको छ पुरुष शरीर । एक मानिस आफ्नो पत्नी छोडपत्र गरेर बस 'भन्दै म छोडपत्र तपाईं' तीन पटक हो । उहाँले सम्बन्धविच्छेद भने यो मा गरेको थियो यो गर्मी को क्षण, तर केवल भने पत्नी सहमत (र मात्र तीन अवसरमा.). अर्कोतर्फ, पनि भने एक पत्नी छ, राम्रो कारण खोज्न छोडपत्र ( जी.
यदि पतिले भएको छ अविश्वासी, दुरुपयोग वा वीरान उनको, या मा लगी आपराधिक गतिविधि), त्यो गर्न पर्छ एक लागि अदालत मामला सुने गर्न. पति कायम हुनुपर्छ एक तलाकशुदा पत्नी र कुनै पनि छोराछोरी देखि विवाह भने पत्नी असमर्थ छ समर्थन गर्न आफु उहाँले दाबी गर्न सक्छन् जिम्मा कुनै पनि छोराहरू जब तिनीहरू पुग्न उमेर को दस । एक महिला सामान्यतया लाभ उनको परिवार, र केही. हुनत एक मुस्लिम महिला हुन सक्छ, विवाह छैन एक गैर-मुसलमान मानिस नभएसम्म उहाँले धर्मान्तरित इस्लाम, उल्टो मामला छैन. तथापि, गैर-मुसलमान महिला अक्सर दबाव मा परिवर्तित, र त्यहाँ भएको धेरै अवस्थामा विदेशी महिला विवाह अरब र त्यसपछि खोज स्थानीय संस्कृति र जीवनशैली हो रोकटोक. यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने घटना मा, को बिरामी यस्तो संघ, छोराछोरीलाई सामान्यतया राखिएको द्वारा पति मा आफ्नो घर देश । प्रवासी कामदारहरूको सामान्यतया विवाह हुन खाडी मा प्रदान, तिनीहरूले पूरा कि नागरिक र धार्मिक आवश्यकताहरु को लागि आफ्नो घर देश । दूतावास र वाणिज्य दुतको कार्यालय कर्मचारी कहिलेकाहीं प्रदर्शन नागरिक विवाह समारोहको आयोजना, फेरि प्रदान भनेर निश्चित आवश्यकताहरु भेट गर्दै । धार्मिक समारोहको आयोजना व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, तर केवल देश मा अनुमति कि चर्च वा यस्तै गैर-मुसलमान ठाउँमा को उपासना छ । यो मामला छैन साउदी अरब मा.
यदि मान्छे को विभिन्न, विवाह अधिकारीहरूले कहिलेकाहीं जाँच्नै परिस्थितिमा विवाह कि सुनिश्चित गर्न को सुविधा छैनन् ठाँउ लिएर गर्न अध्यागमन आवश्यकताहरु । यो जानकारी थियो त्यसैले उपयोगी मा लेखन मेरो कागज भन्दा साउदी अरब विवाह । धेरै धेरै धन्यवाद ।.
नैतिक हर्जाना लागि क्षतिपूर्ति मा निवेशक-राज्य विवाद मध्यस्थता द्वारा पैट्रिक
यस लेखमा जाँच मुद्दा को मौद्रिक क्षतिपूर्ति द्वारा सम्मानित मध्यस्थता अधिकरणों नैतिक हर्जाना लागि दु विदेशी लगानीकर्ताले को सन्दर्भमा लगानीकर्ता राज्य मध्यस्थता छ । यो जाँच प्रकृति र समारोह को नैतिक हर्जाना अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कानुन साथै धेरै विवादास्पद मुद्दाहरूसहित उचित फारम नैतिक हर्जाना दु एक राज्य कि. प्रमाण को खराब उद्देश्य लागि आवश्यक अवस्था छ. एक न्यायाधिकरण पुरस्कार क्षतिपूर्ति र कि क्षतिपूर्ति सीमित हुनुपर्छ अवस्थामा सम्बन्धित"भीषण"वा गम्भीर सन्धि उल्लंघन । लेख भनेर विशेष सरकारी कार्य तिर विदेशी लगानीकर्ताले एक दिने वास्तविक को क्षतिपूर्ति राशि सम्मानित हुन लागि नैतिक हर्जाना छ । लक्ष्य मात्र छ वास्तविक क्षति भोगे तर पनि पठाउन एक"स्पष्ट सन्देश"पाहुना राज्य ।.
र ऋण संग्रह, संयुक्त अरब इमिरेट्स - देवदार वित्तीय
सङ्कलन एक ऋण मा संयुक्त अरब इमिरेट्स लाग्न सक्छ असम्भव छ । भाषा र सांस्कृतिक बाधाविदेशी नियमहरू र भन्सार. र सरासर दूरी सबै आयातित गम्भीर चुनौतीहरू छन् । ऋण पुन छ जब तपाईं प्रयोग एक संग्रह एजेन्सी धाराप्रवाह मा नियमहरू र भन्सार को देश जहाँ ऋणी बस्नुहुन्छ हाम्रो मा-गहिराई बुझ्न को स्थानीय नियम. भन्सार र संस्कृतिका गारंटी सबै भन्दा राम्रो सम्भव ऋण मध्यस्थता परिणाम । मा देवदार वित्तीय. हामी मान्छे राखे पहिलो सबै गरिरहेको. हामी गर्न सक्छन् फिर्ता आफ्नो पैसा प्राप्त गर्दा अझै पनि संरक्षण संग राम्रो सम्बन्ध आफ्नो ग्राहक हाम्रो रणनीतिक सार्वजनिक सम्बन्ध प्रयास गर्दै निष्पक्ष. तर दृढ-सुनिश्चित आफ्नो प्रतिष्ठा छ हाम्रो प्राथमिकता हो । हामी मिल्नु एक मान्छे-उन्मुख दृष्टिकोण संग नवीनतम प्रविधी-संचालित समाधान ड्राइव गर्न परिणाम प्रदान गर्दछ र एक राम्रो सम्पर्क व्यवस्थापन । यो व्यापक विधि परिणाम हुन्छ तपाईं आवश्यक संरक्षण गर्दा ग्राहक सम्बन्ध छ । साथै. हाम्रो नेटवर्क ऋण को संग्रहकर्ता. वकीलहरु. आपूर्तिकर्ता र विक्रेताहरु कदर सम्बन्ध त्यो प्राप्त गर्न हामीलाई अनुमति दिन्छ. काम गरेको छ । हामी मूल्य यी प्रत्येक सम्बन्ध. कुनै कुरा कसरी सानो वा ठूलो छ ।.
किन अरब बारेमा गुनासो इस्राएलका कब्जे भूमि मा प्यालेस्टाइन, तर अरब लिइरहेको मुलुकमा उत्तर र पूर्वी अफ्रिका, परंपरागत अरब भूमि ।
किन अरब बारेमा गुनासो इस्राएलका कब्जे भूमि मा प्यालेस्टाइनतर अरब लिइरहेको मुलुकमा उत्तर र पूर्वी अफ्रिका. परंपरागत अरब देशमा? कपट र डबल स्तर लगभग मा इस्लामी देशहरू - र अरब देशका को भाग हो इस्लामी कसरी गरे अरब अन्त सम्म कब्जा नौ देशहरू मा अफ्रिका? यो थियो एक भूमि लिनु वा गरे तिनीहरूले नरसंहार प्रतिबद्ध मा अफ्रीकनहरु प्राप्त गर्न ती मुलुकमा? किन छैन अरब मान्छे रिसाए वा टर्की टर्क्स लागि पहिला कब्जे अरब मुलुकमा र घृणा तुर्क साम्राज्य रूपमा एक विदेशी आक्रमण देखि अरब त धेरै देशमा. किन छैन तिनीहरूले बसोबास फिलीस्तीनियों मा साउदी अरब वा कुवेत छ । इस्राएलका छ कब्जे एक सानो टुक्रा को देशमा । कसरी गरे अरब अन्त सम्म कब्जा नौ देशहरू मा अफ्रिका? यो थियो एक भूमि लिनु वा गरे तिनीहरूले नरसंहार प्रतिबद्ध मा अफ्रीकनहरु प्राप्त गर्न ती मुलुकमा? किन छैन अरब मान्छे रिसाए वा टर्की टर्क्स लागि पहिला कब्जे अरब मुलुकमा र घृणा तुर्क साम्राज्य रूपमा एक विदेशी आक्रमण.
सस्तो स्वामित्व अपार्टमेन्ट बिक्री को लागि टर्की मा किन्न सस्ता स्वामित्व अपार्टमेन्ट संग अचल सम्पत्ति
टर्की एक रणनीतिक स्थित देश बीच युरोप र एशिया मातपाईं पाउन सक्छन् ठूलो र वैविध्यपूर्ण सम्झौता किन्न अपार्टमेन्ट समुद्र अनदेखी छ । र थाहा हुनुपर्छ पूर्वाधार. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधा र सार्वजनिक सेवाहरू तिनीहरूलाई घटेका छन् । यो छनौट गर्न आवश्यक छ. अपार्टमेन्ट निर्माण मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुसार किनभने यस प्रकार अपार्टमेन्ट मा मूल्य भन्दा समय छ । निवेशक पर्छ कि छैन. पक्का घर. उहाँले किन्न हुनेछ छ नि संरचनात्मक दोष साथै मुक्त कुनै पनि ऋण. वित्तीय सम्पत्ति वा कानूनी परिणामहरू छ । लागि देख एक विश्वसनीय अचल सम्पत्ति एजेन्ट प्रयोग गर्न खरीद मा र स्वामित्व अपार्टमेन्ट र समाधान गर्न कुनै समस्या तपाईं सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ कि. यो परिवारको लागि आवास वा पट्टा. र लागि मासिक आर्थिक लाभ छ । हामी पनि तपाईंलाई सहयोग मा पछि-बिक्री सेवा यस्तो पट्टा र जीवित मा एक शहर जस्तै ट्र्याबजन छ कि एक अद्भुत प्रकृति र सिद्ध मा वसन्त र गर्मी मौसम थप्न हुनेछ. एक जादुई स्पर्श गर्न वाई मा एक रणनीतिक स्थान मा इस्तांबुल अपार्टमेन्ट किन्न भनेर मा स्थित समुद्र छ जो एक लगानी र पर्यटक मौका कहाँ भाडा गुण पाउन को लागि सबै भन्दा राम्रो मौका मा लगानी इस्तांबुल गुण एक्सप्रेस परियोजना तपाईं मा लगानी गर्न सक्छन् टर्की अचल सम्पत्ति र खरीद लक्जरी अपार्टमेन्ट - पाउन अपार्टमेन्ट बिक्री को लागि इस्तांबुल मा संग सबै भन्दा राम्रो सम्झौता को टर्की अचल सम्पत्ति मा लगानी गर्न पार्क वर्ग परियोजना मा एक ठूलो स्थान छ । जटिल मानिन्छ छ हुन प्रतिमा को ट्र्याबजन शहर संग यसको सुन्दर वास्तु डिजाइन र बारी गर्न सक्छन् सपना वास्तविकता मा.
वकील जब मा संयुक्त अरब इमिरेट्स
काम विवरण सहायता समूह को टाउको मुद्दा सुनिश्चित गर्न जहाँसम्म सकेसम्म (दिइएको को लागि आवश्यकताहरु को एक उच्च मानक काम उत्पादन) मा सबै भन्दा कम संभव लागत । लागि देख एक जूनियर साथी सामेल एक प्रतिष्ठित व्यवस्था दृढ मा आधारित बेरुत र दुबई हो । उम्मेदवार छ छ अनुभव मा कर्पोरेट व्यवस्था र ठेक्का मस्यौदा छ । प्रमुख जिम्मेवारी: -सल्लाह मा अधिकार
जिम्मेवारी र दायित्व कम्पनी को व्यापार सञ्चालन मा -सुनिश्चित गर्दछ कि संगठन छ अनुपालन मा सबै अनुप्रयोग अमेरिकी व्यवस्था कडा परियोजनाहरु प्र - अबू धाबी.
यूएई म हाल काम संग एक अमेरिकी व्यवस्था कडा गर्न खोजिरहेका छन्. जसले थप एक मध्य-वरिष्ठ स्तर संगत गर्न आफ्नो परियोजनाहरु मा टीम.
र को भाडा अनुबंध - दुबई
सबैभन्दा लागि हो, एक वर्ष भए तापनि छोटो अवधि दिन्छ सम्भव छ, या त साप्ताहिक वा मासिक सबै भाडा ठेके दर्ता हुनुपर्छ अनलाइन संग मा, वेबसाइट (जसको अर्थ, मेरो भाडा मा अङ्ग्रेजी) या त यो घर धनी वा मोहि दर्ता सक्छ ठेक्का बिना सूचना यो अन्य पार्टी । दर्ता पट्टा मदत गर्छ छन् भने कुनै पनि बीच विवाद को जमींदार र मोहि मा । यो घर धनी वा पट्टा कार्यालय प्रदान गर्नु पर्छ, एक मोहि संग भवन नियम (वा समुदाय -) भाडादारों लागि कब्जे, एक घर बहु-एकाइ बासस्थान वा जीवित मा एक समुदाय । भने एक मोहि - वा एक जमींदार - चाहनुहुन्छ समाप्त गर्न एक सम्झौता अघि अनुबंध को अन्त, तिनीहरूले दिन पर्छ सूचना अनुसार मामला मा निस्कने सेट को पट्टा सम्झौता । भाडादारों सक्छ, अझै पनि लागि जिम्मेवार हुन बाँकी भाडा भुक्तानी कारण मा पट्टा सम्म एक नयाँ मोहि सुरक्षित छपरिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो पैसा मा अर्को मुद्रा । चाहे तपाईं खरीद गरिरहनुभएको आफ्नो ठाँउ मा सूर्य वा पठाउने पैसा घर, मुद्रा बेलायत प्रक्रिया बनाउँछ रूपमा चिल्लो र लागत-प्रभावकारी रूपमा सम्भव छ ।.
मजा छुट्टी - प्रकारको हुन वकिल दिन
वकिल गरिएको छ
तिनीहरूले प्राप्त हुन सक्छ खराबतर तिनीहरूले आवश्यक छन् गर्न को समाज र न्याय प्रणाली छ । अनौपचारिक छुट्टी द्वारा सिर्जना गरिएको थियो स्टीव ह्यूजेस. एक अमेरिकी संचार विशेषज्ञ रूपमा राष्ट्रिय प्रकारको हुन वकिल दिन मा. हुन प्रकारको वकिल दिन. पनि रूपमा ज्ञात अन्तर्राष्ट्रिय प्रकारको हुन वकिल दिन. मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्न दयालु ती सबै अभ्यास गर्ने व्यवस्था र पक्का कानूनी सिस्टम मा एक देश काम द्वितीय सजिलै । तापनि कानूनी पेशा को एक छ. सबैभन्दा पुरानो व्यवसाय को इतिहास मा मानवजातिको. एक विषय को मजाक र देखेको छ रूपमा एक आवश्यक दुष्ट द्वारा सार्वजनिक यस कारण घृणा तिर वकिल देखि पलाउँछ एक सामान्य धारणा सबै वकील चार्ज अधिक भन्दा देखि आफ्नो ग्राहकहरु र गर्न इच्छुक छन् दुरुपयोग कानूनी सिस्टम मा क्रम प्राप्त गर्न र न्याय मा आफ्नो ग्राहक पक्षमा छ । हुन प्रकारको वकिल दिन प्रयास गर्न. यो मिथक र बिउँताउनुहुन्छ बारे जानकारी. रचनात्मक र महत्त्वपूर्ण भूमिका वकिल राख्नु कि सुनिश्चित मा एक समाज कार्यहरु द्वितीय सजिलै । अनौपचारिक छुट्टी स्वीकार्छन् भन्ने सबैले अनुहार एक जबकि मा एक पटक र अस्वीकार को भाग हो मानव अनुभव छ ।.
अध्यागमन वकिल, कानून कम्पनीहरु मा संयुक्त अरब इमिरेट्स लागि हरेक शहर
अमेरिकी अध्यागमन कानुन वकीलहरु प्रदान कानूनी सेवा जो व्यक्तिहरूलाई छैनन् नागरिक को (पहिला रूपमा चिनिएको पहाडी साथीहरूले), आधिकारिक आयो अस्तित्व को उद्घाटन संग यसको अबू धाबी कार्यालय को औं मासुरु गरेर श्री अब्दुल्लाह अब्दुल हिल, दृढ बढेको छ निरंतर र । भए को एक ठूलो कानूनी सेवा प्रदायकको संसारमा माध्यम मा एक विलय को अभूतपूर्व क्षेत्र मा कानूनी क्षेत्र छ । जबकि ठूलो मात्रा मा, विलय रणनीति सरल थियो - सिर्जना गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी अभ्यास सक्षम हेरविचार लिएर को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानूनी आवश्यकता छ । मा, हामी कानूनी ज्ञान, अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय पुग्न र व्यापारिक ध्यान गर्न सल्लाह सबै पक्षलाई मा अन्तर्राष्ट्रिय कमर्स.
केही वकिल सञ्चालन मा दस देशहरुमा, हामी प्रदान गर्न एक वैश्विक र सहज सेवा बीस-चार घन्टा एक दिन. हामी गतिशील छन् ।.
लाइसेन्स ड्राइभिङ मा अरब देशहरू - जीवित
हामी प्रयोग गरेको ड्राइभिङ लाइसेन्स किराए वाहन र ड्राइव मा अन्य (गैर जीसीसी) अरब देशहरुमा यस्तो जोर्डन वा लेबनान छ । यो छोटो पर्यटक भ्रमण । वेतन विश्व कप हुनेछ किक संग यसको पहिलो संस्करण नोभेम्बर मा यस वर्ष
भेटी तीन अर्ब देखि विश्वभरिका मौका मा प्रत्येक अन्य विरुद्ध प्रतिस्पर्धा अनलाइन खेल अखडा । तपाईं छौं चाहे एक प्रवासी दक्षिण एसियाली राष्ट्र वा हौं अन्य कुनै पनि देश.
दुनिया मा 'बंगलादेश महोत्सव निश्चित छ आनन्द संग तपाईं यसको सांस्कृतिक भेटी । पूर्व शस्त्रागार प्रशिक्षक थियो जो संग शस्त्रागार लागि बीस-दुई वर्ष थियो.
निकै प्रभावित मा फिफा विश्व कप योजना बनाएको बताउँदै.
यो प्रस्ताव एक पुरा नयाँ अनुभव गर्न खेलाडी. प्रशंसक र अधिकारीहरु समान छ ।.
र देश र मान्छे को अरब
यो मुस्लिम देखि अरब मा र प्रतिशत छ । अरबी भाषा र इस्लाम, अरबी धर्म हो । यसको शिखर मा अरब साम्राज्य विस्तार देखि एटलान्टिक महासागर पार, उत्तर अफ्रिका र मध्य पूर्व गर्न केन्द्रीय एशिया मसीही विद्वान ती दुई मुलुकमा प्राप्त देखि धेरै इस्लामी ज्ञान, र र को शुरुवात आधुनिक पश्चिमी विज्ञान थिए लिइएको देखि भाग मा अरब । यो अरब पनि शुरू युरोप ग्रीक दार्शनिकहरू, जसको लेखहरू तिनीहरूले पहिले नै अनुवाद गरिएको अरबी को उद्भव तुर्क मा प्रतिशत छ । र तुर्क तुर्क मा प्रतिशत छ । समाप्त विशेष अरब मा प्रभुत्व इस्लाम, यद्यपि मुस्लिम संस्कृति अझै पनि बाँकी मा पुरानो अरब प्रतिष्ठान छ । मा प्रतिशत, अरब नेताहरूले प्रयास गर्न एकजुट अरब-बोल्ने दुनिया मा एक अरब राष्ट्र । देखि सबैभन्दा अरब देशहरू, सामेल छन् अरब लिग यसको उद्देश्य भइरहेको विचार गर्न विषयहरूमा को साधारण चासो छ । मूल चार्टर सदस्य थिए इजिप्ट, सिरिया, लेबनान, (अब जोर्डन), इराक, साउदी अरब र यमन छन् । प्यालेस्टाइन लिबरेशन संगठन प्रदान गरियो पूर्ण सदस्यता मा. अन्य वर्तमान सदस्यहरू समावेश अल्जेरिया, बहराइन, कोमोरोस, डिजिबुटी, एरित्रिया (विचाराधिन), कुवेत, लिबिया, माउरिटानिया, मोरक्को, ओमान, कतार, सोमालिया, सुडान, टुनिसिया, र संयुक्त अरब इमिरेट्स संग बीस-दुई सदस्य अमेरिका मा अरब लीग को मध्य, प्रयास गर्न फोर्ज एकता बीचमा अरब जारी गरेको छ । सायद सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक कारक को लागि अरब गरिएको छ खोज र विकास को पेट्रोलियम उद्योग को दुई तिहाई को संसारको तेल भंडार हुन लाग्यो मध्य पूर्व मा
अरब साधारण बजार मा स्थापित भएको थियो, र खुला छ सबै अरब लिग सदस्य । साधारण बजार सम्झौता प्रदान गर्न लागि अन्तिम को भन्सार महसूल मा प्राकृतिक स्रोत र कृषि उत्पादनहरु, निःशुल्क आन्दोलन राजधानी र श्रम सदस्य देशहरू बीचमा, र समन्वय को आर्थिक विकास । देखि एक नित्य लागि समस्या अरब अमेरिका भएको छ आफ्नो सम्बन्ध संग यहूदी राज्य को इजरायल, बाहिर सिर्जना पूर्व अरब इलाका वैमनस्यता तिनीहरूलाई बीच परिणामस्वरूप छ चार अरब.
मा लिग पहिलो पटक चढाएको इस्राएलका संग सामान्य सम्बन्ध अरब देशहरुमा भने यो निश्चित अवस्था भेट, तर ती थुप्रै थिए अवस्था छैन स्वीकार्य संग इस्राएलका देखि समाचार । धेरै वर्ष को लागि, नजिक राजनीतिक एकता सदस्यहरु बीच थियो बीच एक भाग समर्थक-पश्चिमी सदस्य देशहरू र वा समर्थक-सोभियत व्यक्तिहरूलाई अधिक हालै विभाजन गरिएको छ बीच र अरब.
प्रतिनिधि कार्यालय - व्यापार मा संयुक्त अरब इमिरेट्स, दुबई
यो वकील को शक्ति को पक्षमा हाम्रो कर्पोरेट वकील (पाठ थपिएको छ तल) - संकल्प मा प्रतिनिधि कार्यालय दर्ता (आवश्यक वाक्य थप गर्दै तल) - आवेदन लागि प्रतिनिधि कार्यालय दर्ता (पाठ थपिएको छ तल) । अधिमानतः को आवेदन मा हुनुपर्छ लेटरहेड को कानूनी एकाइ छ (आमाबाबुले कम्पनी) - व्यापार रजस्ट्री को देश को आमाबाबुले कम्पनी - बैंक कथन (प्रमाणपत्र) संग जानकारी को खाता नम्बर को आमाबाबुले कम्पनी, नाम, थर, द्वारा हस्ताक्षर बैंक कर्मचारी संग हस्ताक्षर, बैंक छाप छ । एक नोटरी पर्छ प्रमाणित बैंक कर्मचारी हस्ताक्षर । - यो वकील को शक्ति को लागि प्रतिनिधि कार्यालय निर्देशक मा दुई प्रतिलिपिहरू (मंत्रालय लागि अर्थव्यवस्था लागि र निर्देशक) - निर्देशक पासपोर्ट प्रतिलिपि (पृष्ठ र पृष्ठ संग दर्ता ठेगाना मा)- निर्देशकको पहिचान कोड प्रतिलिपि (हामी प्रदान एक सेवा को कोड प्राप्त समयमा दस दिन को लागि विदेशीहरू. सबै कागजातहरू हुनुपर्छ द्वारा प्रमाणित नोटरी मा देश को द्वारा वैध र अनुवादित युक्रेनी (संग निम्न नोटरी प्रमाणीकरण को अनुवादक गरेको हस्ताक्षर). लागत को अनुवाद संग नोटरी प्रमाणीकरण - सात प्रति पृष्ठ. बाहिर पकेट खर्च भुक्तानी गरिनेछ दर्ता: राज्य जिम्मेवारीहरू र संग्रह अर्थव्यवस्था मंत्रालय युक्रेन को कर अधिकारीहरूले (व्यक्तिगत उपस्थिति को प्रतिनिधि कार्यालय निर्देशक छ) पेन्सन कोष रोजगार कोष सामाजिक बीमा कोष तथ्याङ्क प्रशासन बैंक खाता सुरुको मा निर्भर गर्दछ, एक बैंक खर्च अनुवाद को, नोटरी बनाउने, को छाप र अन्य दुई देखि सय सम्म तीन सय. यो अवधि को दर्ता: न्यूनतम - पन्ध्र कामकाज दिन, अधिकतम - सत्तरी कामकाज दिन । यो अवधि को दर्ता मा अर्थव्यवस्था मंत्रालय (बिना माथि) दुई महिना । माथि को दर्ता प्रक्रिया सामान्य अवधि को दर्ता पाँच छ सप्ताह. यो अवधि को काम अनुमति प्राप्त लागि एक विदेशी नागरिक एक महिना हो । माथि को काम अनुमति प्राप्त गर्नका लागि विदेशीले (कामकाज दिन) लागत तीन सय.
भौगोलिक पुन: नामकरण
भौगोलिक पुन: नामकरण छ परिवर्तन को नाम को एक भौगोलिक विशेषता वा क्षेत्र छ । यो गर्न सक्छन् सीमा परिवर्तन देखि सडक को नाम परिवर्तन गर्न नाम को एक देश छ । केही नाम परिवर्तन गर्दै स्थानीय तर नयाँ नाम द्वारा मान्यता छैन, अन्य देशहरू, विशेष गरी जब एक फरक छ भाषा माअन्य नाम हुन सक्छ आधिकारिक मान्यता तर मा रहन साधारण प्रयोग । धेरै ठाउँमा विभिन्न नाम मा विभिन्न भाषा, र परिवर्तन को भाषा मा आधिकारिक वा सामान्य प्रयोग छ अक्सर नतिजा के मा छ एक परिवर्तन को नाम. धेरै कारण छन् उतरदायित्व लिनु गर्न पुन: नामकरण संग, राजनीतिक उत्प्रेरणा हुनुको मुख्य कारण उदाहरणका लागि, थुप्रै ठाउँमा मा पूर्व सोभियत संघ र यसको उपग्रहहरु थिए पुन: नामाकरण गर्न आदर. एक को सबै भन्दा साधारण कारण एक देश लागि आफ्नो नाम परिवर्तन भर्खरै स्वतन्त्रता प्राप्त छ । जब सिमाना परिवर्तन, कहिलेकाहीं कारण देश विभाजन वा दुई देशका सँगै सामेल, को नाम को प्रासंगिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । यो, तथापि, छ अधिक सृष्टिको एक अलग इकाइ भन्दा एक काम को भौगोलिक पुन: नामकरण. परिवर्तन देख्न सक्छ, एक पूर्ण विभिन्न नाम अपनाए भइरहेको वा हुन सक्छ, मात्र अलिकति परिवर्तन हुन हिज्जे केही अवस्थामा स्थापित संस्थाहरूको संरक्षण पुरानो नाम को पुन: नामाकरण ठाउँमा आफ्नो नाम जस्तै, यो मा बुसान, दक्षिण कोरिया मा पेकिङ विश्वविद्यालय, बेइजिङ बम्बे स्टक एक्सचेन्ज, र बम्बे उच्च अदालतले मुम्बई मा विश्वविद्यालय को मद्रास, मद्रास स्टक एक्सचेन्ज, मद्रास उच्च अदालत, र आईआईटी मद्रास मा चेन्नई विश्वविद्यालय मलाया, मलाया, मलेशिया र (दक्षिण पश्चिम अफ्रिका जनता संगठन), सत्तारूढ पार्टी को नामिबिया. अक्सर वृद्ध नाम विद्यमान हुनेछ अभिव्यक्ति । उदाहरणका लागि, यो पकवान रूपमा अंग्रेजी मा जानिन्छ 'पेकिङ धुनमा' भनेर नाम पनि जब, चिनियाँ राजधानी परिवर्तन यसको लिपिबद्ध गर्न 'बेइजिङ'. परिवर्तन प्रणाली मा हुन सक्छन्, सामान्य वा प्रमुख परिवर्तन मा हिज्जे मा रोमन वर्णमाला लागि भौगोलिक संस्थाहरुको पनि बिना कुनै पनि परिवर्तन को नाम मा वा हिज्जे स्थानीय वर्णमाला वा अन्य. नाम मा गैर-रोमन अक्षर पनि हुन सक्छ धेरै फरक छ जब रोमनाइज्ड विभिन्न युरोपेली भाषा छ । चीन विकास र अपनाए पिनयिन प्रणाली मा फरवरी मा ठाँउ को पछिल्लो प्रणाली जस्ता हुलाक र उतारा- धेरै चिनियाँ भौगोलिक संस्थाहरुको (र सम्बन्धित संस्थाहरुको नाम पछि भौगोलिक नाम) यसरी थियो आफ्नो अंग्रेजी नाम परिवर्तन । परिवर्तन कहिलेकाहीं देखा आमूल देखि, यो कहिले काँही मामला को पूर्व थिए देखि व्युत्पन्न क्यान्टोनिज साधारण भाषा मा ब्रिटिश-आयोजित हङकङ गर्दा नयाँ छन् लिइएको पुरा चीनी. पिनयिन द्वारा अपनाए थियो मानकीकरण लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन मा र आधिकारिक अपनाए सिंगापुर मा (परिणामस्वरूप धेरै भौगोलिक नाम परिवर्तन, यसको आफ्नै छ) । तर यो सामान्यतया लागू छैन स्वायत्त क्षेत्रहरु को पीआरसी (. जी ल्हासा, उरुम्की, तातो संग एक उल्लेखनीय अपवाद हुनुको ठाँउ नाम मा निङजिया, जसको मूल मान्छे चीनी बोल्न रूपमा आफ्नो देशी भाषा लागि) र छैन नतिजा मा कुनै पनि भौगोलिक नाम परिवर्तन मा सार्स को हङकङ र मकाउ, र अपनाए छ मात्र भागहरु, ताइवान को विशेष भित्र ताइपे र अन्य नियन्त्रित शहर र काउंटियों मा, एक हाल धक्का अपनाउन पिनयिन द्वारा सरकार । को परिचय को संशोधित स्थानमा - प्रणाली मा सात जुलाई को दक्षिण कोरियाली सरकारले निम्त्याएको छ एक स्ट्रिङ को परिवर्तन गर्न भौगोलिक नाम छ । प्रणाली द्वारा प्रयोग छैन उत्तर कोरिया छ । उदाहरण को परिवर्तन समावेश: को लागि भौगोलिक संस्थाहरुको संग धेरै पूर्व-अवस्थित नाम मा एक वा अधिक भाषा, एक वा सक्छ बिस्तारै र प्रयोग अंग्रेजी भाषा छ ।.
मध्यस्थता मा साउदी अरब: साउदी मध्यस्थता नियमहरु
व्यवस्था छ एक अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता बुटीक व्यवस्था कडा कानुनी प्रतिनिधित्व प्रदान लागि व्यापारिकनिर्माण र लगानी मध्यस्थता मा सबै.
राजनीतिक कैदीहरूलाई मा साउदी अरब
Prosedur awam di Kanada